विमानस्थलमा मन्त्री प्रेम आले पक्राउ : ७ रोलेक्स, ७ आइफोन, ७ बोतल रक्सी बरामद – Points Nepal
विमानस्थलमा मन्त्री प्रेम आले पक्राउ : ७ रोलेक्स, ७ आइफोन, ७ बोतल रक्सी बरामद
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८ समय: ४:३८:२३
भन्सार छलेर उपहार ल्याउँछन् मन्त्री, प्रेम आलेले ल्याए ७ रोलेक्स, ७ आइफोन र ९ बोतल रक्सी
विदेशबाट सामान ल्याउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कडाइ छ, तर विदेशमा दु:खजिलो गरेर आउने कामदारलाई मात्र!
मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थलाई छुट भइरहेको छ। ७ वटा रोलेक्स घडी, ७ वटा आइफोन प्रो १३ र ९ बोतल रक्सी ल्याउँदासम्म पनि।
यसरी भन्सार छलेर लाखौँको सामान भित्र्याएका हुन्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले।
गत नोभेम्बरमा लन्डनमा ट्राभल एन्ड टुरिजम एक्स्पो (डब्लूटीएम) आयोजना भएको थियो। विश्वभरका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। नेपालको तर्फबाट पनि प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यक्रममा सहभागीता रहने गरेको छ।
सन् २०२१ को डब्लूटीएममा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मी र म्यानेजर लक्ष्मण गौतम सहभागी थिए।
त्यस्तै पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र मन्त्रीका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी पनि उक्त कार्यक्रममा गएका थिए।
कार्यक्रममा भाग लिन अन्य सहभागीहरू अक्टोबर २८ मा लन्डनतर्फ लागेका थिए। मन्त्री र स्वकीय सचिव भने अक्टोवर ३१ मा लन्डन गएका थिए। मन्त्री आले लन्डनबाट नै स्कटल्यान्डमा आयोजित कोप २६ मा पनि सहभागी हुन पुगेका थिए।
कार्यक्रमका लागि गएका सबै सहभागीले आउने र जाने दुईतर्फी टिकट कतार एयरवेजमा काटेका थिए। अन्य सहभागीहरूले दुईतर्फी टिकट १ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा काटेका थिए।
तर मन्त्री आलेले बिजनेस क्लासको टिकट काटेर १२ लाख रुपैयाँ खर्चेका थिए।मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रीले स्वकीय सचिवलाई पनि सोही बराबरको टिकटमा लन्डन लगेका थिए।
यसरी टिकटमै ‘सौख’ देखाएका मन्त्री आलेले विदेशबाट फर्कंदा त हदै गरे। ७ वटा रोलेक्स घडी, ७ वटा आइफोन प्रो १३ र ९ बोतल रक्सी भन्सार छलेर नेपाल छिराए। त्यो पनि उच्च पदस्थहरूलाई उपहार दिनका लागि!
मन्त्री आलेले काठमाडौं फर्किंदा ड्युटी फ्रीमा लाखौँको सामान खरिद गरेर काठमाडौं ल्याएको खुलेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाने नेपालीलाई एक जना बराबर ५ सय डलर मात्रै लैजाने सुविधा दिएको छ। राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समेत चुनौती दिँदै मन्त्री आलेले भने लाखौँ पर्ने सामान खरिद गरेर काठमाडौं ल्याएका छन्।
मन्त्री आलेले लन्डन जाँदा २० हजारभन्दा बढी डलर खर्च गरेकोसमेत पाइएको छ। जब कि लान पाइने ५ सय डलर सटहीका लागि समेत नेपालमा ‘क’ वर्गको मान्यताप्राप्त बैंकमा स्वयम उपस्थित भएर आयस्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने नियम छ।
अहिले भन्सार कार्यालयले एउटा मोबाइल र एउटा घडी तथा ड्युटी फ्रीको रक्सीसमेत एक बोत्तलभन्दा बढी ल्याएका जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर मन्त्री आलेले स्कटल्यान्ड विमानस्थलबाट लन्डन आउँदा ५ बोतल डबल ब्ल्याक लेबल खरिद गरेका थिए। पुनः लन्डनबाट ५ नोभेम्बरमा नेपाल फर्कँदा दोहा विमानस्थलमा ४ बोतल सिवास रिगल खरिद गरेका थिए। अतिरिक्त सामानका कारण मन्त्री आलेले लन्डनमा दुईवटा सुटकेस थपेका थिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री त्यतिमै रोकिएनन्। उनले ७ थान रोलेक्स घडीसमेत किने, नेपालमा शीर्ष नेताहरूलाई उपहार दिनका लागि। फरक फरक मूल्यमा पाइने रोलेक्समध्ये मन्त्री आलेले किनेको रोलेक्सको मूल्य ७ लाख रुपैयाँ हाराहारी परेको स्रोतले बतायो।
त्यस्तै मन्त्री आलेले दोहामै ७ वटा आइफोन १३ प्रो खरिद गरेका थिए। आइफोन १३ प्रोको लागि मात्र उनले झण्डै २० लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए।
यसरी अथाह सामान ल्याएका मन्त्री विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएनन्। तत‍् तत् उपहार उनले केही परिवारका सदस्यसहित सम्बन्धित उच्च पदस्थसम्म पुर्‍याइसकेका छन्।
भीआईपीको चेकजाँचमा खासै चासो नदिने भएकाले पनि मन्त्री आलेले देशको कानूनलाई चुनौती दिँदै सबै सामान सहजै काठमाडौं ल्याएका थिए।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले दुईवटा आइफोन मात्र ल्याएको दाबी गरेका छन्। ‘धेरै सामान ल्याएको भन्ने कुरा झुटा हो, दुईवटा आइफोन मात्र ल्याएका हौँ, एउटा मन्त्रीजीको लागि र एउटा मेरो लागि ल्याएका हौँ’ रेग्मीले भने।
भन्सार कार्यालय भन्छ- सबैलाई उही नियम हो
मन्त्री आलेले भन्सार छलेर अथाह सामान लिएर आइसक्दा पनि भन्सार कार्यालय भने सबैलाई उही नियम लागू हुने जनाउँछ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराई भीआईपीको पनि अरू सामान्‍य आगन्तुकसरह नै उही प्रक्रियाबाट चेकजाँच हुने बताउँछन्। ‘ह्यान्डक्यारीको माथि प्रवेशमै चेक हुन्छ, लगेज त रेगुलर सिस्टमबाटै चेक हुन्छ।
भीआईपीहरूको लगेज लिन कहिलेकाहिँ आफ्नो मान्छे भने खटाउँछन्’ भट्टराईले भने। कही कतै लुकाएर छुटेको पाइए कारबाही हुने समेत भट्टराईले बताए।
Last Updated on: December 6th, 2021 at 4:38 am
५१७८ पटक हेरिएको